Haingana teny fanolorana — tsy mahazatra sy mazava ny zava-mitranga, izay lasa miha malaza any Frantsa. Ny sampan-draharaha»Tanàna ny Daty», dia manasa anao hanatrika ny antoko ao ny endrika ny hafainganam-pandeha-Mampiaraka ao amin’ny Fiarahana amin’ny hafainganam-pandeha Mampiaraka: ny tantara sy votoatin’ny tari-dalana
Ny fahaiza-miasa mahomby ny fomba izany haingana Niaraka efa ela voaporofo any amin’ny firenena Tandrefana. Ao Frantsa, ny olom-pantatra toy izany endrika dia somary vao haingana, fa ny mahaliana azy ireo mitsaha-mitombo. Izao rehetra ny fo irery ny new York city manana vintana be ny mahita ny soulmate: noho izany dia mila fotsiny mba ho tonga-po ny zava-nitranga, nokarakarain’ny ny manam-pahaizana manokana.
Matetika ny antoko no natao ho an’ny olona mitovy taona ny sokajy.
Izy ireo anjara mitovy isa ny lehilahy sy ny vehivavy
Ny ankizivavy no voaisa latabatra isaky ny dimy minitra, mipetraka ny vaovao solontenan’ny fananahana matanjaka kokoa. Nandritra ny miaina ny fifandraisana, ny interlocutors manao ny fahatsapana ny tsirairay. Isaky ny mini-daty tokony ho fizahana eo ambany manokana»sarintany safidy». Araka ny antoko ireo mpikarakara ny Fiarahana mandefa ny fifandraisana ireo mpivady izay manana ny fiaraha-miory amin’ny lalao.
Antoko Mampiaraka ny hafainganam-pandeha Mampiaraka ny»Tanàna ny Daty»
Ny sampan-draharaha mikarakara tsy tapaka hariva ny filalaovana fitia ao an-tanànan’i new York sy manasa ny rehetra mba handray anjara ao aminy. Ho an’ny solontenan’ny isan-taona sokajy voalamina ny antoko tonga — ny olona. Midika izany fa ianao dia ho afaka amin’ny iray alina, mba hiresaka amin’ny — ny olona.
Ho an’ny zava-nitranga miaraka isika hisafidy ny aina efi-trano ao amin’ny mendrika ny andrim-panjakana. Ny mpivady tsirairay mifandray amin’ny rivo-piainana mahafinaritra ny minitra. Izany dia voaporofo fa izany no tandrify fotoana mba hahatakatra ny fomba ny olona izay mahaliana. Araka ny famantarana ny olona mifindra tany ity tabilao manaraka ity. Tsara ny mozika, ny fialan-tsasatra ho an’ny sakafo sy ny fialam-boly efi-trano hanampy anao mba miala sasatra sy mankafy ny hariva.
Taorian’ny fifandraisana ny partygoers filalaovana fitia, manantena amim-pifaliana ny fialam-boly amin’ny dihy, izay izy ireo dia ho afaka hizara ny coordinates ny toerana tena ny olona. Hetsika nokarakarain’ny fikambanana»Tanàna ny daty», tsy toy mankaleo ny fivoriana. Miandry mampientam-po, mavitrika ary mahafinaritra ny antoko Fiarahana izay efa nanampy olona maro mba hahita ny fitiavana.
Tena zava-nitranga tao new York
Ny lazan’ny hafainganam-pandeha ny Fiarahana sy ny antoko avy amin’ny»Tanàna ny Daty»dia tsy mitsaha-mitombo.
Misy antony vitsivitsy:
Ny fiarovana sy ny tsy hanahirana
Mahita antony tokony hihaona amin’ny tena fiainana dia mafy be, mitaky fotoana bebe kokoa. Ao amin’ny Fiarahana club ianao no mila izany rehetra ny hariva dia hitsena am-polony maro ny olona vaovao ary hiresaka aminy. Amin’ity tranga ity, dia tsy ilaina ny fanohanana bebe kokoa ny fifandraisana.
Ny fanantenana ny Mampiaraka. Matetika ny antoko dia nitsidika an’ireo izay mitady ny fitadiavana ny fanahy vady ho zava-dehibe mitady ny fifandraisana maharitra sy ny mieritreritra momba ny fanambadiana.
Ny fahafahana hanatrika ny hetsika amin’ny taona rehetra. Amin’ny Fiarahana mba hahita fahasambarana dia mety tsy vitan’ny tanora, fa ny olona ny afovoany sy ny be taona ny taona. Ny zava-nitranga dia manaporofo fa ny fitiavana no mendrika ny zava-drehetra.
Toy ny fanao dia mampiseho, dia ny manetry tena sy unsociable ny olona eo am-panaovana ny antoko Mampiaraka be niova. Ny rivotra no tena namana, ny aina sy ny ara-boajanahary fa ny olona rehetra dia mety ho mahaliana sy matoky olona. Farafahakeliny ny mpandray anjara antoko hafainganam-pandeha-Mampiaraka mahita ny mpiara-miasa ho an’ny fifandraisana matotra. Raha menatra na tsy ampy ny fotoana no tsy mamela anao mba handamina ny fiainana manokana ny manokana, avy amin’ny klioba»Tanàna ny Daty». Isika hanolotra fanomezana mari-pankasitrahana ho fandraisana anjara amin’ny antoko ho an’ny namana sy ny havan-tiany
← Fampidirana Sary
Fifandraisana olana: ny olana fa hanatsara ny fifandraisana →